ikhaya/11 Windows/Iindlela ezi-4 zokukhupha iinkqubo zokusebenza kwiWindows 11
Vangelis9. October 2021
NgeWindows 11 uyenzile Microsoft uyila ngokutsha izicelo ezininzi. Ukusetwa koKhetho kuye kwaba lula xa kuthelekiswa neWindows 10. Nangona kunjalo, iinkqubo kwiWindows 11 zitshintshile kancinci ngenxa yohlengahlengiso lwesicelo "seseto". UMicrosoft wakhe ngeendlela ezininzi zokukhupha ii-apps okanye iinkqubo. Siza kubonisa izinto ezi-4 ezinokwenzeka apha.
Inkqubo khipha iiNkqubo
1 Inkqubo khipha iiNkqubo
2 Inkqubo Khipha iinkqubo ngokuseto
3 Khipha iinkqubo zokusebenza ngokuqala / ukukhangela iWindows 11
4 Khipha ii -apps kwimenyu yokuqala Windows 11
5 Khipha ii -apps kwimenyu yokuqala ephambili
Ngubani ongaziyo ukuba usebenzisa iWindows, ufaka uninzi olukhulu Iiapps kunye neenkqubo. Kodwa ayisiyiyo yonke into obuyithembile kwaye ufuna ukuyisusa kwakhona. Abanye Iiapps kunye neenkqubo yongeza kwisiQaliso ukuze uqalise nabani na owenza inkqubo ukuqala kwaye ulibazise de iWindows ikulungele ukusebenzisa.
Apha ngezantsi uyakufumana Iindlela ezi-4 ukukhupha usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Inkqubo Khipha iinkqubo ngokuseto
Umsebenzi oqhelekileyo kunye nosetyenziswa rhoqo ukukhipha iinkqubo zokusebenza kusetyenziswa useto.
Cinezela indibaniselwano yesitshixo IWindows + mna.
Kwiwindow evuliweyo khetha ngasekhohlo "Iinkqubo" emva koko ucofe "IiNkqubo neeMpawu".
Uya kufumana uluhlu lwayo yonke into oyifakileyo Iiapps kunye neenkqubo.
In 11 Windows ukukhupha i-app kufuneka ucofe ekunene kuyo amanqaku amathathu eboniswe ecaleni kongeniso losetyenziso kunye nenketho Khipha khetha.
Uya kufumana umyalezo omncinci apho kuya kufuneka uqinisekise ukungqinisiswa okungafakwanga. Emva kokucofa NONE iapp iyasuswa.
Khipha iinkqubo zokusebenza ngokuqala / ukukhangela iWindows 11
Ngoku sibonakalise umgangatho osemgangathweni ongentla ukukhupha usetyenziso kwiinkqubo, zikho ezinye iindlela zokususa iiapps. Iyasebenza nayo Qala / khangela.
Cofa kuloo nto Iwindows yeWindows Kwitreyi yenkqubo.
Kwibha yokukhangela ephezulu, ngenisa igama le app okanye inkqubo.
Kwicala lasekunene kuya kubakho ukhetho Khipha iboniswe kwi-app.
Cofa apha NONE
Usaya kufumana umyalezo nokuba uqinisekile ukukhipha usetyenziso. Ngokucofa kanye NONE iapp iyakususwa kwiWindows 11.
Khipha ii -apps kwimenyu yokuqala Windows 11
Kuyenzeka ukuba ukhuphe ii -apps nge Windows 11 qala imenyu. Ezinye (ayizizo zonke) ziya kuvela kwimenyu yokuQala.
Vula oko Qalisa imenyuapho ucofa khona Iwindows yeWindows cofa kwitreyi yenkqubo.
Uyabona ukuba zininzi iinkqubo eziqhotyoshelwe kwimenyu yokuqala. Cofa kuyo kwaye ukhethe ukhetho Khipha.
Uya kufumana incoko yababini yokuqinisekisa apho ucofa khona iqhosha Khipha Cofa ukuze ususe usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Khipha ii -apps kwimenyu yokuqala ephambili
Enye indlela yokukhupha i-app kukusebenzisa imenyu yokuqala njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Nangona kunjalo, ayizizo zonke iinkqubo kunye neenkqubo ezibonisiweyo kwimenyu yokuqala. Nantsi into oyenzayo.
Vula imenyu yokuqala ngokunqakraza kwi Iwindows yeWindows cofa kwitreyi yenkqubo.
Ngasekunene, cofa "Zonke iiapps"
Zonke iiapps ezifakiweyo ziyaboniswa. Skrolela ezantsi kuluhlu kwaye ufumane inkqubo ofuna ukuyikhupha.
Cofa ekunene kwi-app ofuna ukuyisusa kwaye ukhethe ukukhipha. Cofa Khipha xa ucelwa.
Windows 11 yongeza igama lokugqitha, misela kamva
Windows 11: Ungayisusa njani iifolda kwi "Le PC"